दुई इलामेली साक्षी राखेर ओली-प्रचण्डबीच तीन घन्टा छलफल : के के भयो संवादमा ? | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
NAGARIKKHABAR TV २०७७ साल आश्विन १२ गते, सोमबार
२०७७ साल आश्विन १२ गते, सोमबार
बेपत्ता बाबु खोज्दै छोराछोरी
खोटाङ कोरोना मुक्त
विभिन्न ९ प्रकारका ह्याण्ड स्यानिटाइजर स्वास्थ्यका लागि हानिकारक
कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १० लाख नाघ्यो : हेर्नुस् कुन देशमा कति ? (सूचीसहित)
अर्मेनिया र अजरबैजानबीच युद्ध, २३ को मृत्यु
संसदमा बहस चलिरहंदा प्रेमिकाको यौनांग चुमे सांसदले (भिडियोसहित)
मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न : महत्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णय
प्रहरीद्वारा प्रयोग भइसकेका ३ लाखभन्दा धेरै कण्डम बरामद !
दक्षिण एसियामा कोरोना : भारत सबैभन्दा अगाडि, नेपाल चौथो स्थानमा
वैज्ञानिकले पत्ता लगाए कोरोनाका असामान्य लक्षण : के के हुन्छ नयाँ लक्षणमा ?
यी हुन् काठमाडौंका कोरोना धेरै प्रभावित क्षेत्र : कुन ठाउँमा कति संक्रमित ? (सूचीसहित)
access_time२०७७ साल श्रावण १८ गते, आईतवार ०४:०० PM chat_bubble_outline Comments folder_open राजनीति
काठमाडौं । नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच आइतबार झण्डै तीन घन्टा छलफल भएको छ । बिहान ९:४५ मा सुरु भएको भेटवार्ता दिउँसो १ बजे सकिएको थियो ।
आजको भेटवार्तामा दुबैतर्फबाट एक-एकजना नेता सहभागी थिए । दुई इलामेलीलाई सांक्षी राखेर गरिएको भेटवार्तामा विवादका सबै विषयमा छलफल भएको थियो । नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ ओली-प्रचण्डको संवादमा सहभागी थिए । दुवैजना इलामबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेता हुन् ।
भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेकपामा देखिएको विवाद अन्त्यका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ । छलफलको सुरुवात भए पनि सकारात्मक भने हुन सकेन । ती नेताका अनुसार दुबैपक्षबाट आ-आफ्ना तर्क राखिएको थियो ।
के भयो त आज ?
सुरुवातमा अनौपचारिक विषयबस्तुबाट छलफल थालिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मिल्नुको विकल्प नभएको र निकासका लागि सबै पक्ष लचक भएर मात्रै निकासको विन्दुमा पुग्न सकिने धारणा राखेका थिए । उनले भने, 'सकरात्मक हिसाबले छलफल गरौँ । समग्र पार्टी कार्यकर्ता र आमजनतामा नेकपाको विवादले नकारात्मक असर गर्न थालिसक्यो । हामी सबैलाई गाली गर्न थालेका छन् । हामी गम्भीर भएर जाऔँ ।'
प्रचण्डको कुरा सुनिसकेपछि ओलीले पनि सुरुवातमा सकारात्मक पहल गरौँ भन्ने धारणा राखेका थिए । उनले भने, 'सकरात्मक पहल गरौँ । तर, कसरी ? मिल्ने विन्दुमा छलफल गरौँ । बहुमत देखाउने काम कसैले नगरौँ । मिल्नकै लागि मैले बैठक स्थगित गरेको थिएँ । तपाईँले बैठक रोक्न किन नसक्नु भएको ?'
प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक र विधान अनुसार माग भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर निकास निकाल्ने प्रस्ताव राखे । उनले भने, 'पार्टी एकताका लागि म लचक हुँदै आएको छु । मैले छाड्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन । तर, अब आमजनता र कार्यकर्ताको भावना अनुसार निकास निकाल्नका लागि स्थायी कमिटी र विधान अनुसार माग भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाम । त्यहाँबाट निकास खोजौँ । त्यसबीचमा हामीहरु पनि छलफल गरौँ । विधि र प्रक्रियाको कुरा तपाईँले पनि मान्नुपर्छ । विधि र प्रक्रिया मान्दा सानो भइँदैन ।'
ओलीले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसक्ने बताए । उनले भने, 'अहिले स्थायी कमिटी आवश्यक छैन । केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि उचालेर बोलाइएको हो । त्यसैले त्यो बैठक पनि बस्न म सक्दिँन । बरु सचिवालय बैठकसम्म बस्न सकिएला । पार्टी एकता गर्ने तपाईँ र म भएपछि अरु किन चाहियो ? अब स्थायी कमिटी बैठक सकिएको घोषणा गरौँ । केन्द्रीय कमिटी पनि बस्दैन ।'
प्रचण्डले फेरि पार्टी एकता गर्दाको पृष्ठभूमिसहित ओलीलाई सम्झाउन खोजे । उनले भने, 'पार्टी एकता गर्दा र त्यसपछिका सबै कुरा मैले त्यागेर यहाँसम्म आएको हो । तपाईँलाई पार्टी फुटाउन दिँइदैन । पार्टी फुटाउने तपाईँको चाहना पूरा हुँदैन । निकासका लागि स्वेच्छाले तपाईँले के छाड्ने, के राख्ने भन्ने निर्णय गर्नुस् । पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर जानुको विकल्प हामीसँग छैन ।'
प्रचण्डको कुरा सुनेका ओलीले आफूले कुनै पनि कुरा त्याग गर्न तयार नभएको बताए । उनले भने, 'अर्को महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष छाड्ने कुरा हुँदैन । यो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री पनि छाड्ने कुरा हुँदैन । एकदुईजना साथीहरुका मन्त्री बनाउनु पर्नेछ भने गरौँ । होइन भने, अब आ-आफ्नो बाटो लागौँ । एकता-एकताको कुरा नगरौँ । तपाईँहरु आफ्नो अनुकूल बढ्नुस, म पनि अगाडि नै बढ्छु ।'
अध्यक्षद्वय ओली-प्रचण्डको कुरा सुनेका वरिष्ठ नेता खनालले अडानबाट पछि हटेर निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थायी कमिटी सदस्य नेम्बाङले पार्टी विधान र आवश्यकताका आधारमा छलफलबाट निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए । खनाल र नेम्बाङले निरन्तर छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतको दावी छ ।
पछिल्लोपटक साउन १३ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले एकतर्फी स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेका थिए । ओलीले स्थगित गरेको बैठक पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सञ्चालन गरेका थिए ।
विवाद बढेपछि आज पाँचौँ दिनमा मात्र अध्यक्षद्वयबीच संवाद भएको छ ।
नेकपा अध्यक्षद्वय ओली-प्रचण्डको भेटवार्ता सकियो
ओली-प्रचण्डबीच बालुवाटारमा संवाद सुरु, वरिष्ठ नेता खनाल पनि सहभागी
ओलीले प्रचण्डलाई पठाए सन्देश : वार्ताका लागि अनिच्छुक, आफ्नो तर्फबाट कम्परमाइज असम्भव !
प्रचण्डले पठाए संवादका लागि ओलीलाई सन्देश : ओलीले राखे दुई सर्त !
खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग असन्तुष्ट नेताले भने, 'हामी तपाईँसँगै छौँ, जबज मान्ने कुरै आउँदैन'
नेकपा विवादमा ओली र प्रचण्डको आ-आफ्नै प्रस्ताव : संवादहीनता तोड्न महासचिवको दौडधुप
बामदेवले ओलीलाई भने, 'मैले यो प्रस्ताव तपाईँलाई खुसी पार्न ल्याएको होइन, त्यो बुझ्नु भयो भने गलत हुन्छ'
यी हुन् नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्ने १५२ जना केन्द्रीय सदस्य (नामावलीसहित)
नेकपा विवाद : बामदेव गौतम भेट्न भैँसेपाटी पुगे प्रधानमन्त्री ओली
नेकपाको ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा यी हुन् आजको बैठकमा सहभागी २९ सदस्य (नामावलीसहित)
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकियो : ओलीले एकतर्फी बैठक स्थगित गर्नू गलत भएको निष्कर्ष
प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा भने, 'कसैको लहड र उत्तेजनाबाट पार्टी विभाजन हुन दिनु हुँदैन'
नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम पुगे बालुवाटार, बैठकमा सहभागी
राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : ओली-प्रचण्ड छलफलमा के भयो ?
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकअघि ओली-प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता
कुकुरबाट कोरोना भाइरस परीक्षण : झण्डै १०० प्रतिशत नतिजा सही (भिडियोसहित)
कुवेतमा ३३ नेपाली अलपत्र : कोरोनाले कम्पनी बन्द, ६ महिनामा पनि उद्धार भएन
ट्याङ्की फुट्दा ५० हजार लिटर रेड वाइन सडकमा, भिडियो भयो भाइरल (भिडियोसहित)
कोरोनापछिको पर्यटन : विशेष प्याकेजको तयारीमा सरकार, देश दर्शन गराउँदै